सबैभन्दा पहिले पार्लियामेन्ट भवन दाङमा : सहरी विकासमन्त्री चौधरी - Goraksha Online
सबैभन्दा पहिले पार्लियामेन्ट भवन दाङमा : सहरी विकासमन्त्री चौधरी
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुईसाता नाघिसकेको छ । यसबीचमा प्रदेश सरकारले अझै पनि गति लिनसकेको छैन । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको स्थायी राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिनसकेका छैनन् । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट परिमार्जनको काम पनि हुनसकेको छैन । सरकार गठन भएको दुईसाता बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णाकार लिनसकेको छैन । स्थायी राजधानी निर्माण प्राधिकरण समेत गुमनामजस्तै बनेको छ । स्थायी राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नयाँ सरकारले ल्याउन खोजेको बजेट र प्राथमिकता तथा सरकारको पूर्णताका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका सहरी विकास तथा पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
 मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको संयुक्त गठबन्धन सरकार गठन भएको करिब तीन साता पुग्नथाल्यो तर सरकारले अझै पूर्णता पाउनसकेको छैन नि ?
 अहिले विद्यमान मौजुदा मन्त्रालयहरू धेरै फरक–फरक विषयसँग जोडिएका छन् । कुनै निश्चित कामका लागि निश्चित मन्त्रालय बनाउनुभन्दा पनि धेरै कार्यक्षेत्रलाई जोडेर मन्त्रालय बनाइएका छन् । ती मन्त्रालयहरूलाई विशिष्टिकृत गरी कुनै खास कामका लागि खास मन्त्रालय बनाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी साउन २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको यहाँलाई जानकारी नै छ ।
सरकारले बल्ल भदौ ७ गते विश्वासको मत लियो । गठबन्धनभित्रै मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय नटुङ्गिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट तीन÷तीनजना मन्त्री र एक–एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गठबन्धनका दुई दलबीच सहमति करिब करिब सहमति भइसकेको छ । तर, दुवै पार्टीमा आकांक्षी धेरै जना हुँदा मन्त्री छान्न सकस भएको छ । आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक पनि हो । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या पनि थप गर्ने तयारी छ ।
शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । तर अहिले गठबन्धनलाई भाग पु¥याउन मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय हुनसक्छ । मन्त्रालय टुक्र्याउन मन्त्रालयको नामाकरणसहित मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव सरुवा भएका र नयाँ मुख्य सचिव आएको एक–दुई दिन मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको अवस्था पनि मैले यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । मलाई लाग्छ यसै साता सरकारले पूर्णता पाउनेछ । यस विषयमा गठबन्धन पार्टीबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।
 स्थायी राजधानीको कामकाज दाङबाट कहिलेसम्म हुन्छ ? तपाईं सहरी विकासमन्त्री पनि भएको नाताले केही स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
 हो, हामी सबैको सबैभन्दा चासो यही विषयमा छ । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय अलरेडी लालमटियामै छ । अब विस्तारै ल्याण्डपुलिङ र सर्भेका कामहरू पूरा भइसकेपछि अन्य मन्त्रालयहरू पनि दाङमा सार्नेछौँ । त्यो भन्दा पनि पहिले त हामीले संसद् भवन नै दाङ ल्याउने अधिक्तम प्रयत्न गरिरहेका छौँ । डिपिसी भएर थन्किएको प्रदेशसभा भवनलाई पूर्णता दिने काम तत्काल सुरु हुनेछ । सम्भवतः असोज १ गतेसम्म नयाँ बजेट आउनेछ । सोमवारै बसेको क्याबिनेटले यो निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
बजेट पारित भएलगत्तै प्रिफेव संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । म तपाईंको पत्रिकामार्फत् आम जनतालाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म स्थायी मुकामका भौतिक संरचना निर्माणका कुनै पनि प्रगति भएको अवस्था छैन । कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन् भनेर हावादारी कुरा गर्ने काम मात्र अघिल्लो सरकारले गर्दै आएको छ । कुनै पनि कन्सल्टेन्टले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक लक्षित काम सकेको अवस्थै छैन । मेरो मन्त्रालय लालमटियामा सञ्चालनमा आइरहँदा थप दुई÷चारवटा भवन उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षालयका प्राचार्यलाई कुरा गरेँ । तर, प्राचार्यले माथिको आदेश नभएको भनेर पञ्छँदै गएका छन् । यसका लागि म आफैले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमीमा उच्च नेतृत्वसँग कुरा गरिरहेको छु ।
सम्भवतः संघीय सरकारबाट यो विषयमा चाँडै टुङ्गो लगाइनेछ । प्राविधिक शिक्षालयलाई व्यवस्थित रूपमा अन्यत्र सारेपछि त्यहाँ उपलब्ध जमिनसँगै अन्य सम्भावित जग्गामा अन्य मन्त्रालयका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण हुने म सबै जिल्लाबासीलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु । स्थायी राजधानी भनेको एक÷दुई वर्षका लागि होइन, हामीले कम्तिमा दुई सय वर्षपछिको अवस्थालाई समेत थाम्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अभ्यासमा छौँ, ता कि त्यो बेलाको पिढीले पनि हामीले निर्माण गरेका स्थायी राजधानीका संरचनाहरूलाई आत्मसात गर्न सकून् ।
यो अवस्थाले पनि स्थायी मुकाम दाङमा निर्माण गर्न सानो कुरा होइन, केही समय लाग्छ । र, म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु कि आउँदो हिउँदे अधिवेशन दाङमै हुने गरी पार्लियामेन्ट भवन तयार हुनेछ । पार्लियामेन्ट दाङ आयो भने त स्थायी मुकाम पूरै दाङ आइसकेको झल्को हुनेछ ।
 प्रसंग बदलौँ, तपाईंहरूले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने खेलपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो, जुन संसद्बाट अझै पास हुनसकेको छैन । यही बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कि अर्को बजेट ?
 हामीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई स्वीकार गरेका छैनौँ । हामीले नयाँ बजेट ल्याउँछौँ । त्यो बजेट संसद्बाटै अनुमोदन पनि गराउनेछौँ । अहिले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नयाँ बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।
बजेटको आकारमा केही परिवर्तन हुनसक्छ । शीर्षकहरू फेरबदल हुनसक्छन् । हामीले आगामी असार मसान्तसम्मकै बजेट ल्याउने छौँ, पुरक बजेट होइन । मलाई लाग्छ, असोज १ गतेभित्र बजेट आइसक्नेछ र संसद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउनेछ । बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने खालको नभई जनताका आवश्यकताका आधारमा योजनामा बजेट बढी केन्द्रित हुनेछ ।
हामीले महत्वाकांक्षी बजेटभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने अन्तिम कसरतमा छौँ । बजेटको बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धन दलहरू तथा कर्मचारी साथीहरूबीच अभ्यास सुरु भइसकेको छ । अहिले प्रदेश सरकार पूरै आगामी बजेटका लागि केन्द्रित छ ।
 अन्त्यमा तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेटको आकार र विशेष प्राथमिकताका बारेमा केही बताइदिनुस् न ?
 मैले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट करिब ७ अर्ब छ । जुन अघिल्लै सरकारले तय गरेको हो । मलाई लाग्छ नयाँ आउने बजेटमा यो रकम अझै बढेर १० अर्बसम्म पुग्नसक्छ । मेरो मन्त्रालयको बजेट पहुँचका आधारमा नभएर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशका सबै जिल्लामा समानुपातिक रूपमा वितरण हुनेछ । विशेष गरी बजेट मुख्य गरेर खानेपानीको क्षेत्रमा बढी खर्च हुनेछ ।
दाङ जिल्लालगायत तराईका बाह्रवटै जिल्ला क्रमशः सुख्खा मरूभूमिकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा खानेपानीको समस्या दिनदिनै विकराल बन्दै गएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट यो कारणले पनि बढी खानेपानीमा केन्द्रित हुनेछ । सबै नागरिकलाई मुहानदेखि मुखसम्मै स्वस्थ र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउनका लागि विशेष योजनाहरू ल्याइनेछ । उपभोक्ताका आवश्यकताका आधारमा योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछ । अर्को कुरा मैले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ ।
यस कारण पर्यटनका क्षेत्रमा पनि बजेट खर्चिनेछ । पर्यटनसँग बजेट जोडिँदै गर्दा मैले सबैभन्दा बढी फोकस रोजगारीलाई गरेको छ । मेरो यो छोटो कार्यकालमै पनि मैले कम्तिमा १ हजार युवाहरूलाई पर्यटनतर्फ रोजगारीमा जोड्ने गरी पर्यटन क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने तयारी पनि गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु । पर्यटनका हरेक क्षेत्र रोजगारीसँग जोडिने छन् । पर्यटनलाई पनि आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार बनाइने मेरो लक्ष्य रहेको आम जनसमुदायलाई यसै पत्रिकामार्फत् जानकारी गराउन चाहन्छु ।
मेरो खुशी : आफ्नै ठाउँमा सेवा गर्न पाउँदा …
कांग्रेस घोराही–१४ को वडा भेला शनिवार